आर्थिक शक्तिका केन्द्रहरू के हुन्? | अर्थव्यवस्था वित्त
अवश्य पनि, यदि तपाईं इक्विटी बजारमा आफ्नो बचत लगानी गर्न लाग्नु भएको छ भने, तपाईंसँग केन्द्रहरूको सचेत हुनुबाहेक अरू विकल्प छैन जुन विश्वको आर्थिक शक्ति चिह्न लगाउने हो। जहाँ सबै लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको आँखा केन्द्रित गर्छन् कि जान्नको लागि उनीहरूले सबै समयमा के गर्नुपर्दछ। हो खुला स्थितिहरू वित्तीय सम्पत्तिमा वा यसको विपरित, वित्तीय बजारमा तिनीहरूको स्थिति अन्डु गर्नुहोस्। फाइदाको साथ यी वित्तीय केन्द्रहरूले तपाईंलाई शेयर बजारमा तपाईंको अपरेशनहरूमा के गर्ने भन्ने बारे दिशानिर्देश दिन्छ।
आर्थिक शक्ति को केन्द्रहरु धेरै छैन, तर पक्कै पनि ती धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। हदसम्म उनीहरूले निर्धारण गर्छन् वित्तीय बजार को विकास, एक अर्थमा वा अर्को अर्थमा, जस्तो कि हालका वर्षहरूमा भएको छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो एक शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ हरेक पैसामा पैसा कमाउन को लागी तपाइँले अब देखि खोल्न जाँदै हुनुहुन्छ। वा कमसेकम लगानी सुरक्षाको रूपमा। किनभने तपाईं यो बिर्सनुहुन्न कि उनीहरूले तपाईंलाई पैसाको संसारको वास्तविक अवस्थाको बारेमा धेरै मूल्यवान जानकारी दिन्छन्।
आर्थिक शक्तिको साँचो केन्द्रहरूमा जान तपाईंले त्यस्ता प्रतीकात्मक ठाउँमा जानु पर्छ वाशिंगटन, फ्रान्कफर्ट वा भियना। न त तपाईं यो बिर्सन सक्नुहुन्छ कि यी शहरहरू सब भन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक संगठनहरूको केन्द्रहरू हुन्। जुनबाट इक्विटी बजारलाई प्रभाव पार्ने सब भन्दा सान्दर्भिक निर्णयहरू उत्पन्न हुन्छन्। कहिलेकाँही धेरै कडा ओसीलेशनहरूसँग जुन%% सम्म पुग्न सक्दछ र जुन ट्रेडि operations कार्यहरू गर्न वा समान ट्रेडिंग सत्रमा धेरै अनुकूल छ।
1 शक्ति केन्द्रहरू: एक्सचेन्जको दिशा
2 भियना, तेल राजधानी
3 वाशिंगटन वा डलरको शक्ति
4 मौद्रिक कोषको मुख्यालय
5 शहर एक धेरै निर्णायक बजार
6 रणनीतिक उपायको रूपमा
शक्ति केन्द्रहरू: एक्सचेन्जको दिशा
यस विन्दुमा तपाई आश्चर्यमा परिरहनु भएको छ कि विश्वका यी आर्थिक केन्द्रहरू कहाँ अवस्थित छन्। विशेष गरी, ताकि तपाईं उनीहरूको बारेमा धेरै सचेत हुन सक्नुहुनेछ शेयर बजारमा तपाईंको कार्यहरू च्यानल गर्नको लागि। तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक ठाउँमा वितरित हुन्छन्, चाहे तिनीहरू अमेरिकी र यूरोपियन महादेश हो जहाँ उनीहरू प्रायः प्रतिनिधित्व गर्दछन्। केन्द्रहरूको साथ जुन विश्वका मुख्य देशहरूका समाचारहरूमा छन्। अचम्मको कुरा होइन, तिनीहरूले आंशिक रूपमा तपाइँको मौद्रिक जीवनको बारेमा पनि निर्णय लिन्छन्। बिन्दुमा जहाँ सबै अर्थशास्त्र एजेन्टहरू तिनीहरू आफ्ना निर्णयहरूको बारेमा सचेत छन्।
निस्सन्देह, आर्थिक शक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरू मध्ये एक निस्सन्देह जर्मन फ्रान्कफर्ट शहर हो। यो अचम्मको कुरा होइन, यो स्थायी मुख्यालय हो युरोपियन केन्द्रीय बैंक (ECB) जो एक हो जसले युरो क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिहरूको तर्जुमा गर्दछ र इटालियन मारियो ड्रॅगीको अध्यक्षतामा हुन्छ। यो एक विशाल शेयर बजार प्रभाव छ र जारी छ। यस बिन्दुमा यसले वित्तीय बजारहरू पतन वा कुनै पनि समयमा बढ्न सक्दछ। त्यसकारण यो अनौंठो होइन कि यो त्यस्तो उपकरण हो जुन तपाईं स्टक बजारमा तपाईंको कार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
भियना, तेल राजधानी
जर्मनीको वित्तीय राजधानीको धेरै नजिक अस्ट्रियाको राजधानी भियना छ। यो धेरै वर्ष को लागि मुख्यालय भएको छ पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक) जहाँ यो महत्वपूर्ण वित्तीय सम्पत्ति को रणनीतिहरू जाली छन्। जहाँ यो कच्चा तेलको मूल्यलाई यो वित्तीय सम्पत्तिका उत्पादकहरूले लिने निर्णयहरूको आधारमा क्याटापल्ट गर्न सक्दछ। अवश्य पनि, इक्विटी बजारहरू पनि विश्वका केही शक्तिशाली देशहरूले यी बैठकहरूमा के जालसाजी गर्दैछन् भन्ने बारे सचेत छन्।
अर्कोतर्फ, यसको सदस्यहरूले गरेका कुनै पनि निर्णयले उनीहरूको उत्पादन घटाउने काम गर्दछ र त्यसकारण तेलको मूल्य वित्तीय बजारमा उत्रन्छ। या त तेल मा लगानी निर्णय गर्न को लागी वा यसको विपरित मा कच्चा माल को सबै भन्दा जोडिएको मान को माध्यम बाट र शेयर बजार मा सूचीबद्ध छन् जो। यो नाप्नको लागि एक धेरै नै प्रभावकारी रणनीति हो जहाँ शटहरू आउँदैछन् हप्ताहरूमा र यस तरीकाले बचतमा प्रभावकारी बचत गर्न। जस्तो कि पछिल्लो महिनाहरूमा यस वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनको साथ घट्दै गइरहेको छ जुन महत्त्वपूर्णलाई पार गर्‍यो dollars० डलर एक ब्यारल को स्तर.
वाशिंगटन वा डलरको शक्ति
संयुक्त राज्यको राजधानी लगानीको दृष्टिकोणबाट अर्थव्यवस्था पछ्याउने एक स्नायु केन्द्रहरू मध्ये एक हो। यो मात्र होइन यो विश्वको सबैभन्दा धनी राज्यको राष्ट्रपतिको निवास हो। तर किनभने यो जहाँ निर्णयहरू द्वारा लिइएको हो संघीय रिजर्व संयुक्त राज्य अमेरिका (FED) को। सबै चीजमा जुन पैसाको मूल्यसँग सम्बन्धित छ र विश्वको सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभावको साथ। यस बिन्दुमा कि लगानीकर्ताहरूको एक राम्रो हिस्सा आफ्नो लगानी रणनीति आकार दिन ग्रह को यस भाग मा आफ्नो आँखा फिर्ता। मौद्रिक नीतिहरूमा निर्भर गर्दै उनीहरूले यो अन्तर्राष्ट्रियमा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्रासंगिकता लिन्छन्।
वाशिंगटनको कुरा गर्नु भनेको वित्तीय बजारसँगको सम्बन्धलाई बुझाउनु हो। यिनीहरू न्यू योर्कमा अवस्थित छन्, प्रतिनिधित्व गर्दछ पर्खाल सडक जुन जहाँ प्रत्येक दिन लाखौं र लाखौं शीर्षकहरू आदानप्रदान हुन्छन्। के मा आधुनिक पूँजीवाद को एक cradles मानिन्छ र जो दुनिया भर मा साना र मध्यम लगानीकर्ताहरु को एक ठूलो अंश को लागी संदर्भ विन्दु हो। मुख्य बुँदा सूचकांकहरु संसारको यो महत्त्वपूर्ण भागमा हुने आन्दोलनहरु मा निर्भर गर्दछ। जस्तो कि यो तपाईंलाई धेरै भन्दा धेरै अवसरहरूमा भएको थियो जब लगानीहरू गर्दा र धेरै वर्ष काम गरे पछि स assets्कलन सम्पत्तिलाई लाभदायक बनाउने प्रयास गर्दा।
मौद्रिक कोषको मुख्यालय
उही गन्तव्य नछोडिकन हामी अर्को प्रासंगिक विशेष प्रासंगिकता जस्तै जीव भेट्यौं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वा के उही हो, जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू ग्रहको आर्थिक भविष्यको लागि गरिन्छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो देश र देश बीचको आर्थिक विस्तारका नीतिहरू प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। यदि यो अन्तर्राष्ट्रिय स something्गठन केहि चीज द्वारा विशेषता छ भने, यो किनभने यो विश्व को मुख्य देशहरु मा आर्थिक असंतुलन सही गर्न को झुकाव छ। यो सबै पछि स्पेन सहित एक राम्रो भाग मा भएको छ।
अवश्य पनि, सबै बजारहरू आफ्ना रिपोर्टहरूप्रति संवेदनशील छन्, र उनीहरूको परिणाम स्वरूप स्टक सूचकांक एक दिशा वा अर्कोमा विशेष तीव्रताका साथ दोहोरो हुन्छ। वित्तीय बजारमा धेरै कडा आन्दोलनको कारण। धितोको अधिकतम र न्यूनतम मूल्यहरू बीचको महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू र केहि केसहरूमा यो हुन सक्छ २% वा%% स्तरहरू पार गर्नुहोस्। धेरै सट्टेबाज लगानीकर्ताको मनपराउन को लागी जो छोटो समय मा कसरी तिनीहरूले पूंजी नाफा को एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो प्राप्त गर्न सक्छन् देख्न। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै पनि समयमा के भन्न सक्दछ भन्ने बारे सँधै सचेत रहन्छ।
शहर एक धेरै निर्णायक बजार
यूरोपियन महाद्वीप भित्र, लन्डन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष उपस्थितिको साथमा अन्य राजधानीहरू माथि। अचम्म मान्नुपर्दैन, बेलायती पूंजी लगानी गर्नका लागि एक उत्तम एपिकेंटर मानिन्छ। स्टक बजारमा मात्र हैन, यदि कुनै प्रकारको आर्थिक सम्पत्तिको लागि होईन भने। कच्चा माल, बहुमूल्य धातुहरू र वित्तीय व्युत्पन्नहरू केहि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बीचमा जहाँ तपाईं बचतलाई अहिलेबाट लाभदायक बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै शहरमा खरीद र बेचेको छ र यो कुनै पनि लगानीकर्ता को लागी एक संदर्भ हुन जान्छ। न त यो बिर्सिन सकिन्छ कि विश्वव्यापी वित्तीय मध्यस्थताको एक राम्रो हिस्सा स्थापित छ।
यो भूमण्डलीकरणको प्रतिमान हो किनकि यो विश्वको सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा अवस्थित छ र थोरै वित्तीय बजारहरू यस सटीक समयमा गर्दछन्। युरोपेली संस्थाहरूबाट अलग्गिए पछि पनि यी सबै ब्रेक्सिटको परिणामको रूपमा जुन गत वर्ष अनुमोदन भएको थियो। तर यो नयाँ वित्तीय क्रम मा यो यूरोपीय स्थान को प्रासंगिकता बाट अलग छैन। अचम्म मान्नुपर्दैन, युके इक्विटीहरू विश्वमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो। सबै अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारहरूको उच्चतम ट्रेडिंग भोल्यूमको साथ।
रणनीतिक उपायको रूपमा
तपाईंले देख्नु भएको होला, त्यहाँ आर्थिक शक्तिका धेरै केन्द्रहरू छन् जहाँबाट तपाईंसँग सेयर बजारमा स्थिति लिनको लागि सन्दर्भ हुनसक्दछ। तपाईंको व्यक्तिगत सम्पत्ति सुधार गर्ने प्राथमिक उद्देश्यको साथ। किनभने तपाईंसँग अधिक जानकारी हुनेछ तपाईले लिनु हुने निर्णयहरूमा उनीहरूलाई लागू गर्नको लागि। यो मात्र जब शेयर बजार मा प्रत्यक्ष लगानी गर्न आउँछ। यदि यसको विपरित होईन भने, अन्य वैकल्पिक समाधानहरूको विकल्प छान्नुहोस् जुन अहिले सम्म तपाईंले बचतलाई लाभदायक बनाउने कुरामा विचार गर्नुहुने छैन।
अवश्य पनि, तपाईं यो भुल्न सक्नुहुन्न कि यी वित्तीय केन्द्रहरू एक राम्रो परिभाषित लगानी रणनीति प्रमोट गर्न समाधान हुन सक्छ। जसमा सबै भन्दा माथि, उत्तम सम्भावित निर्णयहरू लिन विश्लेषण उपकरण हुनु सर्वोपरि हो। अन्य प्राविधिक विचारहरू माथि र अधिक रणनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि। त्यसो हो भने तपाईं शेयर बजार क्षेत्र मा आफ्नो सबै उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको लगानी खातामा राम्रो परिणामको साथ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » आर्थिक शक्तिका केन्द्रहरू के हुन्?
मिश्रित कोषहरू किन लगानीको विकल्प हुन सक्छ?